Lalàna momba ny lalàmpanorenana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Lalàn'ny Lalàm-panorenana
inona ny lahatsoratra amin'ny Code of Criminal Code 51 RF
karazan-dahatsoratra inona avy amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava an'ny Federasiona Rosiana no jerena amin'ny Andininy faha-51 amin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana izay manome zo tsy hijoro ho vavolombelona manohitra ny tenany, ny olon-tiana iray, izay fariparitan'ny Lalànan'ny Federasiona Rosiana. Fehezan-dalàna momba ny heloka bevava Andininy 51. Feperana ...
Inona avy ireo andraikitra sy zon'ireo mpanara-maso ny fifidianana ao amin'ny Federasiona Rosiana?
Inona avy ireo adidy sy zon'ny mpanara-maso fifidianana ao amin'ny Federasiona Rosiana? Watch. ... Mifantina ao anaty orona .. Ho an'ny mpifidy… Ny mpandinika dia manan-jo: - mifankazatra amin'ny lisitry ny mpifidy; - ao amin'ny biraom-pifidianan'ny mpifidy mifandraika amin'izany ...
fanonerana no dikan'io teny io
fanonerana - ny dikan'ity teny ity ao amin'ny jurisprudence Vola onitra fanonerana ho an'ny fahasimbana; Karama ho an'ny zon'ny tsy ampiasaina; Fomba fandoavana ny adidy amin'ny alàlan'ny fanonerana ny vola takian'ny mpitrosa sy ny mpampindram-bola; Famoahana vola sy fotoana iray ...
Inona ny antontan-taratasy milaza fa Rosia no mpandimby ara-dalàna ny USSR?
Inona ny antontan-taratasy milaza fa Rosia no mpandimby ara-dalàna ny USSR? Tamin'ny 13 janoary 1992, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana dia nandefa taratasy tany amin'ireo lohan'ny iraka diplaomatika tany Moskoa milaza fa manohy manatanteraka ...
Ho an'ny olom-pirenena tokana an'ny Fitsarana Rosiana dia ampiharina?
An'ny fahefana manokana an'ny Federasiona Rosiana ve izany? Tompoko, hendry ianao. Eny, tena sarotra tokoa ve ny mahatratra ny fivarotam-boky ary manodinkodina am-polony ny lalàm-panorenana Rosiana? Andininy 71 amin'ny lalàm-panorenana ...
Momba ny toerana ofisialy sy ny mpiasam-panjakana
Tsy misy ny toeran'ny governemanta sy ny mpiasam-panjakana. ny mpiasam-panjakana dia tsy mpiasam-panjakana fotsiny, fa kosa izay mitazona biraom-panjakana dia. “Andininy 3. Fanjakana sivily ...
hevitra momba ny Lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana, ny foto-kevitra sy loharanony.
ny foto-kevitry ny lalàna momba ny lalàm-panorenana an'ny Federasiona Rosiana, ny lohahevitra ary ny loharano nipoirany. Ny lalàna momba ny lalàm-panorenana dia sampan'ny lalàna mifehy ny fandaminana ny fahefam-panjakana ao amin'ny firenena, ireo endrika lehibe fampiharana io fahefana io, ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny olom-pirenena ...
Ny filoha no mpitantana ny lalàm-panorenana?
ny filoham-pirenena ve no miantoka ny lalàmpanorenana? Eny Araka ny Lalàm-panorenana, eny! Toko 4. Filohan'ny Federasiona Rosiana Andininy 80 1. Ny filohan'ny federasiona rosiana no lohan'ny fanjakana. 2. Ny filohan'ny federasiona rosiana no miantoka ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana, ...
Amin'ny toe-javatra inona avy moa ny Filohan'ny Federasiona Rosiana dia manana zo amin'ny lalàm-panorenana hamongorana ny Fanjakana Duma?
Amin'ny tranga inona avy ny filohan'ny federasiona rosiana dia manana zon'ny lalàm-panorenana mamongotra ny fanjakana Duma? Amin'ity tranga ity dia tsara kokoa ny mampiasa ny loharano tany am-boalohany. Andao isika hitodika any amin'ny Lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana 1. Ny fanjakana Duma dia mety hosinganin'ny filohan'ny Rosiana ...
fanadihadiana lojika sy manokana momba ny lalàna X.NUMX Andininy 4 ao amin'ny Lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana?
fandikana lojika sy manokana-lalàna ny andalana 4 amin'ny andininy 15 amin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana? Ny lalànan'ny federasiona rosiana dia tsy afaka mifanohitra amin'ny fenon'ny lalàna iraisam-pirenena eken'ny besinimaro. Raha tsy izany dia tsy mety izy ireo 1. Fitsipika sy fari-pitsipiky ny int. zo, ...
Ny lisitry ny lahatsoratra natolotry ny Filohan'ny Federasiona Rosiana
Lisitry ny toerana notendren'ny filohan'ny federasiona rosiana andininy faha-83 amin'ny lalàm-panorenan'ny federasiona rosiana Ny filohan'ny federasiona rosiana: a) manendry, miaraka amin'ny faneken'ny State Duma, ny filohan'ny governemanta federasiona rosiana; d) misolo tena ny State Duma ...
Mpanao lalàna. eto dia solontenan'ny Antenimieram-pirenena. inona ny fanontaniana hafa mbola hitranga?) Any Rosia, ny fahefana mpanao lalàna dia solontenan'ny Antenimieram-pirenena Federaly bicameral, izay ahitana ny State Duma sy ny Filan-kevitry ny Federasiona, any amin'ireo faritra ...
Ny hery avy amin'ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana
Herin'ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana Lalàm-panorenana federaly "Momba ny lalam-panorenan'ny federasiona rosiana" Andininy 1: ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana dia rafi-pitsarana mifehy ny lalàm-panorenana, mampiasa fahefana ara-pitsarana mahaleo tena sy mahaleo tena ...
49 fa ilay lahatsoratra
And 49 inona ilay lahatsoratra hoe Constitution of the Russian Federation Art. 49 Fiheverana ho tsy manan-tsiny; APC RF Art. 49 Manova ny fototra na ny lohahevitry ny fitakiana, manova ny habetsaky ny fitakiana, manilika ny fitakiana, manaiky ny fitakiana, milamina ...
24 Andinin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana
Andininy faha-24 amin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana Araka ny andalana faha-2 amin'ny And. 24 amin'ny lalàm-panorenan'ny federasiona rosiana «Ny manampahefana sy ny rafi-pitantanan-tena eo an-toerana, ny tompon'andraikitra amin'izy ireo dia tsy maintsy manome ny tsirairay ny fotoana hahafantarana ny antontan-taratasy sy ny fitaovana, ...
Tantarao ny fizotran'ny fizotry ny fifidianana miaraka amin'ny fanazavana ny tsirairay
Farito ny fizotry ny fizotry ny fifidianana miaraka amin'ny fanazavana isaky ny fizotran'ny fifidianana. Ny fomba fandaminana sy ny fanaovana fifidianana fehezin'ny lalàna. Izy io dia misy dingana tsy miankina izay tsy mitovy amin'ny asa, amin'ny faribolana ...
Inona no endriky ny rafitry ny faritry ny fanjakana ao Rosia izay voasoratra ao amin'ny Lalàmpanorenana? Tohina aho
Inona ny firafitry ny faritany faritanin'i Russia voatanisa ao amin'ny Lalàm-panorenana? Gaga ny federasiona, fa gaga ve ianao amin'ny fanaovana hosoka? Mahaliana ny lohahevitra! Andininy 1 1. Federasiona Rosiana - Rosia ...
Ny karazana zo sy fahalalahan'ny olombelona sy olom-pirenena. Ampio aho hahita ny valiny.
Ireo karazana lehibe indrindra amin'ny zon'olombelona sy sivily ary fahalalahana. Ampio aho hahita ny valiny. Ny zon'ny tena manokana, ny sosialy, ny politika, ny toekarena ary ny fahalalahan'ny olombelona sy ny olom-pirenena dia mizara ho fototra (tsy azo ovaina), fototra (lalàm-panorenana) ary eken'ny besinimaro ...
Afaka haverin'ilay mpividy ny taratasy fanamarinana fanomezana any amin'ny fivarotana?
Afaka mamerina mari-pankasitrahana fanomezana amin'ny magazay ve ny mpanjifa? Mampalahelo fa tsy hiasa ny hanakalo ny taratasy fanamarinana ho vola. Ny taratasy fanamarinana fanomezana dia antontan-taratasy manamarina ny adidin'ny fikambanana hamindra ny entany any amin'ilay mitondra azy amin'ny vola mitovy amin'ny ...
Ankehitriny dia nesorina ny JSC sy ny CJSC. Fa kosa, nivoaka ny OA.
Nesorina izao ny OJSC sy ny CJSC. Nipoitra kosa ny OA. Ny zava-misy dia ny ankamaroan'ny OJSC, na eo aza ny endrika fandaminana sy ara-dalàna azy ireo, dia ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana foana. Tsy izy ireo…
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,603.